Sidee nolol loogu badbaadin karaa magaalo ay adagtahay in aad naftaada ku bad gasho? | Hangool News
March 12, 2019 - Written by Hangool News 1
Magaalo madaxda dalka Afqaanistaan ee Kaabuul, waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu argagaxa badan caalamka. Laakiin waxaa ka shaqeeya kaliya 22 baabuur oo kuwa gargaarka deg degga ah ee loo yaqaanno ambalaasta.
BBC-da waxaa u suurta galay galangal dhif ah oo ay muddo hal isbuuc ah kula socotay shaqaalaha gargaarka deg degga ah, si ay u aragto habka ay u badbaadiyaan nolosha dadka.
“Ma ogaan kartid qofkii saaxiibkaaga ahaa ee hadda ku jira cadowgaaga kula jooga magaalada Kaabuul, meeshan waxaa ka dhaca weerarro iyo qaraxyo badan oo aan la qiyaasi karin meel ay kugu helayaan”, ayuu yidhi mid ka mid ah shaqaalaha oo magaciisa aan u qarinay sababo amni awgood.
Haweeney kale oo ka shaqeyasa gargaarka gurmadka degdegga ah ayaa tidhi: “Dadku marka ay subaxdi kasoo baxaan guryahooda, ma garanayaan in maqribki ay si nabad ah ugu laabanayaan”.
Image captionAmbalaasta ayaa deg deg ku aadda meel kasta oo ay wac ka dhacaan
Howl wadeennada gawaarida gurmadka ayaa mar walba aada goobaha ay wax ka dhacaan iyagoo og in adeeggan uu aad u yaryahay.
22 gaari oo ambalaas ah ayaa ka howl gala Kaabuul oo si joogto ah ay uga dhacaan qaraxyada ismiidaaminta ah iyo weerarrada kala duwan.
Isbitaallada ayaa sidaasoo kale mashquul u ah, saacad walbana qaabila dadka ay dhaawacyada kasoo gaaraan weerarrada.
Frakhondeh oo kalkaaliso ka ah gawaarida ambalaasta ah ee ka shaqeeya magaalo madaxda dalka Afqaanistaan ayaa ka warrameysa waxa ay noloshoodu ka dhigan tahay.
“Waxay ila tahay shaqadeennu waa sida inaan ku jirno ciidanka milatariga, isla sida ay askartu ugu cararaan furinta hore ayaan annaguna ugu cararnaa dadka u baahan gargaarka. Waxaan ku khasbannahay inaan la tacaalno amni darro badan oo ka jirta halkan, ciidamada amaanka ayaa si joogto ah u istaajiya ambalaasteenna si ay u baaraan”, ayey tidhi.
Image captionGaadiidka gurmadka ayaa baaritaanno isdaba joog ah lagu sameeyaa marka ay isbitaalka ula cararayaan dadka
Marka uu gaariga ambalaasta ah soo gaaro goob ay ciidanka ku sugan yihiin, waxaa xitaa baaritaan lagu sameeyaa haweeney foolaneysa, si loo ogaado in ay walxaha qarxa qarsaneyso.
Mid ka mid ah gawaarida ambalaasta ah ee ay BBC-da la socotay ayaa sidaas lagu sameeyay, haweeney askariyad ah ayaana sheegtay in wax dhib ah uusan jirin balse ay baaritaan deg deg ah ku sameyneyso.
Sannadkii lasoo dhaafay ee 2018-kii ayey kooxda Daalibaan qarax ku fuliyeen gaari ambalaas ah oo walxa qarxa laga soo buuxiyay gudaha magaalada Kaabuul.
Tan iyo wixii ka dambeeyay weerarkaas, baabuurta ambalaastu waxay wajahaan baaritaanno xoog leh, marka ay isbitaallada usii socdaan.
Mararka qaar dhow meel ayaa lagu istaajiyaa iyagoo wada dad dhaawacyo halis ah qaba oo isbitaalka loola cararayo.
Dhimashada dadka rayidka ah ee dalka Afqaanistaan ayaa tiradii ugu badneyd gaartay sannadkii lasoo dhaafay.
In ka badan 3,800 oo ruux, oo 927 carruur ah ayaa ku geeriyooday weerarrada iyo qaraxyada ka dhacay dalkaas.